YEYINTNGE(CANADA): Saturday, August 11
အမေရိကန် စီအိုင်အေ The World Facebook ထဲက BURMA ရဲ့ အဓိကလူမျိုးစာရင်းထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီ။
( စကားမစပ်။ ဗမာ ကို Burman ၊ စာပေနဲ့ နိုင်ငံသားကို Burmese လို့ဖော်ပြထားတယ် )
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/11/20120အကြံပြုခြင်း
လွှတ်တော်စားဖားလူ့ငနွားနှင့် အမျှပေးဝေ မြန်မာပြေ
by သံလွင် ရရစ် on Saturday, August 11, 2012 at 4:55am ·
ဟိုတစ်နေ့ကNLDရဲ့ အဆိုဟာ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီးပယ်ချခံခဲ့ရတယ် ..အစကတော့ NLDကရခိုင်အရေးဘာမှ လုပ်မပေးဘူးလို့ ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံင်္ပြီးလုပ်နေတာတောင် မျက်ကွယ်ပြုပြီး
အွန်လိုင်းမှာဖွနေတဲ့ ငမျောက်လေးတွေလဲ ခုတော့ ပါးစပ်တွေပိတ်လို့ အဲဒီနေ့က ကျောင်းမတက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ကုန်ကြပီ..ထားတော့
ဒီငမျောက်တွေက ဟာသသာသာပဲ တကယ်ပြောချင်တာကတော့ ဒိလောက်ကောင်းတဲ့အဆိုကို ပယ်ချတာဟာ ဦးနှောက်မှမူ မှန်သေးရဲ့လားလို့
ဒါမှမဟုတ်နောက်ကွယ်က ဖွတ်င်္ဂလီအမတ်တွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်ရင် ပွဲဆူမှာဆိုးတာကြောင့်
မကွေးအမတ်ကိုအသုံးချသွားတာလား...စဉ်းစားမိတဲ့နောက်တစ်ချက်က အမေရိကန်ရဲ့ဆန်ရှင်ကိစ္စမှာ nldကိုဦးတည်လို့ လွှတ်တော်ထဲမှာအောက်လမ်းနည်းသုံးပြီး
နန်းနုဝါ နှင့်ကြံ့ဖွတ်တွေ စည်းဝါးကိုက်ကာ အတွေ့အကြံနုသေးတဲ့ပြည်သူတွေအထင်မြင်လွဲမှားအောင် လုပ်ကြံတဲ့ကိစ္စ..
ဒါကို nldကသူရဲ့ ပွဲဦးထွက်အဆိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့
အစိုးရဝန်ကြီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အများပြည်သူမြင်သာအောင်မှတ်တမ်းတင်ဖို့အဆိုနဲ့ အဆင့်တန်းမြင့်မြင့် ပြန်ချေပလိုက်တယ်..တကွက် ..
မရိုးသားတဲ့လူတွေကိုလှလှပပကြီး ရိုးရိုးသားသားတကွက်ထည့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ် အရှိုက်တွေထိသွားတယ် မရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဘူး တော်တော်အီသွားပုံရတယ်
အထိနာမယ်ဆိုလဲနာစရာပဲ ဆန်ရှင်ကိုသာပြောနေတာသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေက ကြောက်ခန်းလိလိ အမှန်တင်ပြဖို့တော့မရှိဘူး လိမ်ဖို့ကလဲအချိန်ယူရမှာဆိုတော့ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီး
တပ်မတော်အမတ်တွေအားကိုးနဲ့ မလိုပါဘူးဆိုပီးပယ်ချသွားတယ် (ဒိနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်နော် တပ်မတော်အမတ်က ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ငိုက်နေရာကနေထပယ်ချတာ ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ဘုံအကျိုးတူစည်းဝါးကိုက်ထားပုံ)
အဲဒိတော့ နိုင်ငံအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တာဆောင်ရွက်ဖို့လို့ကြွေးကြော်ပြီးဝင်လာတဲ့ nldကိုလွှတ်တော်ထဲ
အကြပ်အတည်းဆိုက်ရောက်ရေးအတွက် နန်းနုဝါနဲ့ ကြံ့ဖွတ်တသိုက် စည်းဝါးကိုက်စတင်လိုက်တဲ့တိုက်ကွက်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်.
လွှတ်တော်ဟာ ဘာလဲ နိုင်ငံရေး ကစားတဲ့ခတ်ကွင်းပြင်ကြီးများဖြစ်လာမလား ကြံဖွတ်တွေ လူရှေ့မှာပြံးပြ နှုတ်ဆက် နောက်ကွယ်မှာခြေပုန်းခုတ်တော့မလား စောင့်ကြည့်မိတယ်..
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ nldရဲ့နောက်အဆိုတစ်ခုဟာလဲ ပယ်ချခံ၇ပြန်တယ် ဒီတော့ nldဘာလုပ်လုပ် ကန့်ကွက်မယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ယုတ်မာမျိုးမွေးနေပီလား nldတွေ ခြောက်ယောက်တပိုင်းနဲ့ သိပ်မထောင်နဲ့
ငါတို့လက်ထဲမှာ ကန့်ကွက်မဲတွေရှိတယ်လို့များ အသိပေးလိုက်တာလား ပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်
တကယ်တော့ရခိုင်အရေးဟာ လတ်တလော အပူတပြင်းဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဆိုတာတော့ အငြင်းပွားဖွယ်မရှိ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာတော့ ဆိုတာမှာပြဿနာတွေရှိနေတယ် သမ္မတာအစိုးရရဲ့
ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုဟာ အထနှေးတာ နိုင်ငံတကာမီဒီယာကိုအသုံးမချနိုင်တာက လွဲရင် ကျေနပ်စရာရှိပါတယ် ညင်ညင်သာသာကိုင်တွယ်တတ်နေပီ
ညင်သာတယ်ဆိုတာလဲနိုင်ငံတကာဖိအားကိုရှောင်ချင်လို့နဲ့ အကြီးအကျယ်ဖြစ်မလာဖို့ ဆိုတာသိသာပါတယ် ဒါပေမယ့် သမ္မတအစိုးရမှာ လတ်တလောအဖြစ်ကို လတ်တလောဆေးမီးတိုကုနည်း
အပြင်ရေရှည်အတွက် ဘာပလန်မှ ချထားပုံမရသလို အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကနေ အပီးလွတ်အောင်ရုန်းဖို့ အကြံအစည်ထုတ်ထားတာရှိပုံမရပါဘူး ..မဟုတ်ပါဘူး မလုပ်ပါဘူး ဒီလိုပဲငြင်းနေဖို့ပဲ
တတ်သလိုဖြစ်နေတယ် မယုံရင်လာကြည့်ပါ ဒါပဲ လာကြည့်တော့ ဘာဖြစ်လဲ ဘင်္ဂလီက ငိုပြတော့တာပေါ့ ဘယ်ရမလဲ အငိုပိုင်ပြီးသား ရုပ်ခံကလဲ မျက်နှာပေးအလွန်ကောင်းတာကိုး ပွဲခံသွားမှာပေါ့
နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကိုတော့ရှောင်ချင်တယ် ကိုယ့်ဘက်က ခိုင်မာတိကျတဲ့မူဝါဒမျိုးအလျှင်းမရှိဘူး ယုတ်စွအဆုံး နိုင်ငံတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ကြီးက အသံတိတ်နေတယ်
အသက်မဲ့နေတယ် နိုင်ငံတကာဖိအားကိုကြောက်လို့ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေတာကိုလွှတ်တော်ကြီးက အသံမထွက်ရဆိုတော့ ကျနော်တို့ အချုပ်အခြာအာဏာကိုကျနော်တို့ပိုင်တာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစ ..အိန္ဒိယလိုပစ်မိန့်မပေးခိုင်းဘူး ထိုင်းလို
ရေထဲမျှောပစ်ဖို့မပြောဘူး ..ဥပဒေအရကိုင်တွယ်ဖို့လေးပြောတာတောင် ပြောမရဘူးဆိုမှတော့ အဲဒီလွှတ်တော် ဘာအသုံးကျမလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာမကောင်းဘူးလား
ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့ရခိုင်အရေးမှ မပါရင် လွှတ်တော်ကြီးဟာနောက်ဖေးမှာမီးလောင်နေတာကိုရှေ့မှာဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့အေးအေးလူလူ အလာပ သလာပပြောနေတာနဲ့တူတယ်
နောက်သလိုတော့ဖြစ်နေပီ သမ္မတအစိုးရကတော့unhcrကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြောပြီးတာတော့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖိအား ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပီးယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတုန်းပဲ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဘူး
အဲလိုဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလဲ ဘင်္ဂလီတွေကနေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာခိုးဝင်လာတဲ့သူဝင်.. နှစ်ကြာလို့ နိုင်ငံသားဖြစ်သူဖြစ်.. လဝကကြောင့်တခဏခြင်းဧည့်နိုင်ငံသားဖြစ်သူကဖြစ်(အခွင့်ရေးမပေးပါဘူးမပြောနဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာဂုတ်ဆွဲပြလို့ရတယ်)
အဲဒီတော့ သမ္မတအစိုးရမှာရိုဟင်ဂျာအပေါ်တည်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒက တစ်ဖက် နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကတစ်ဖက် ဗျာများနေတော့တာပေါ့
ဒီအချိန်မှာ ကယ်တင်ဖို့ဝင်လာတာကတော့ NLDပဲ ..အစကိုပြန်ကောက်ကြည့်ရင် NLDဟာ ဒီကိစ္စအပေါ် စထဲကတရားဥပဒေနဲ့ယှဉ်တဲ့စကားကိုပဲဆိုခဲ့တယ်အရမ်းကာရောမပြောခဲ့ဘူး ..
ဒေါ်စုရဲ့အမေးအဖြေတွေသက်သေရှိတယ်..အဲလိုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလွှတ်တော်မှာတင်ပြတယ် သိတဲ့အတိုင်းကြံ့ဖွတ်တက်ဖျက်တယ် ရခိုင်ပါတီက nldဘက်ကရပ်တယ်
ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းပြချက်က ပုဒ်မ၁၄၄နဲ့ အခြေအနေမတည်ငြိမ်သေးတာကိုအကြောင်းပြသွားတယ် ..ကောင်းဘီ အခြေနေမတည်ငြိမ်လို့ နိုင်ငံတကာဖိအားကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ဒီလူတွေဟာကိုယ့်
လူတွေမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကဘာလဲ ..ပုဒ်မ ၁၄၄ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းလား ဘာလဲ ..nldရဲ့တင်ပြချက်က ဥပဒေဘောင်ထဲကလုပ်ဖို့နော် ချဖို့နှက်ဖို့လဲမဟုတ်ဘူး
(တကယ်ဆိုနိုင်ငံတော် သမ္မတပြောသွားတဲ့ unhcrကတာဝန်ယူပေးဖို့ကိစ္စကို နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ခံနေရချိန်မှာ ဖိအားကဖောက်ထွက်ဖို့သမ္မအစိုးရကို ဝင်ပြီးဒေါက်ကူထောက်ပေးရာလဲရောက်တယ်)
အဲလိုမလုပ်ပဲဘယ်လိုအမြင်ရှင်းအောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုရှင်းလင်းမလဲ တော်တော်တော့ရင်လေးဖွယ်ကောင်းလာပီ...ကိုယ့်အချုပ်အခြာအာဏာထဲက ကိုယ့်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုယ်လုပ်တာ
ဘယ် နိုင်ငံခြားက လာဖိအားပေးလို့ရမလဲ ဖိအားပေးရင်ကော .နိုင်ငံတကာလေးစားခံရတဲ့ ကမ္ဘာကျော်NLDပါတီကြီးကသူတို့တင်တဲ့အဆိုကိုလာထိလို့ ငြိမ်ခံနေမယ်ထင်လား ဒိနေရာမှာ သမ္မတအစိုးရကသာ
ကျင်လည်မယ်ဆို NLDကို ရှေ့ကတင်ပြီး တေ့ပေးလိုက်ရင် ပွဲတောင်သိမ်းသွားအုန်းမယ် တရားဥပဒေကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးဒေါ်စုထွက်လာလိမ့်မယ်..ဘာမှရေရေရာရာမရှိပဲနဲ့တော့ ဒေါ်စုက နာမည်ပျက်ခံပြီးထွက်မှာမဟုတ်ဘူး
အဲလိုရှောင်လွဲဖို့ လမ်းပြလိုက်တဲ့ nldရဲ့ အဆိုကိုပယ်ချခံရတာတော့ တိုင်းပြည်နာသွားပြီ ရာဇဝင်ရိုင်းသွားပီလို့ဆိုရမှာပဲ ဘယ်ပါတီက တင်ပြသည်ဖြစ်စေ ထောက်ခံရမယ့်အဆိုပဲ nldလိုအင်အားကြီး
နိုင်ငံတကာသိတဲ့ပါတီက တင်ပြတာဆိုတော့ ပို့လို့တောင်ထောက်ခံရဦးမှာမဟုတ်လား ဒါကိုပယ်ချခြင်းဟာ nldဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောပြီး ပြည်သူတွေဆထက်ထပိုးချစ်မှာကို တိုင်းပြည်ပျက်မှာထက်ကြောက်တယ်ဆိုတာ
ထင်းထင်းကြီးကိုပေါ်သွာပီ သူတို့ဖြစ်စေချင်တာက သူတို့ကတော့ အသာငြိမ်နေမယ် nldကိုတော့ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ ပြည်သူတချို့ဘေးတီးတဲ့လမ်းအတိုင်း ဒေါ်စုနဲ့ nldကိုလျှောက်ပြောစေချင်တာကိုး အဲဒါမှ နိုင်ငံတကာမှဒေါ်စုနာမည်ပျက်မယ်လေ
ဒါကိုnldကမူဝါဒခိုင်မာပြတ်သားပြီးသားဆိုတော့ တုတ်တုပ်တောင်မလှုပ်ဘူး ..တရားဥပဒေဆိုတဲ့ ငြင်းမရတဲ့အချက်ကြီး ကိုင်ဆွဲပြီး လွှတ်တော်အလယ်မှာချပြလိုက်တယ် (ဒါကိုတောင်အောက်လုံးသုံးချင်သေးတယ် တင်တဲ့လူက သာကူးမို့တဲ့ အမှန်တော့ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက အစထဲ
သူပြောပြီးသားပဲ nldရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်သူပြန်ပါမယ်ဆိုတာ ..ထားတော့ ဘယ်သူဆိုတာထက် သူတင်တဲ့အဆိုဟာကောင်းမွန်နေတာပဲ) အဲလိုဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ချပြလိုက်တော့ ကြံဖွတ်ပဲဘယ်နေမလဲ
အော့နှလုံးနာရွ့ရှာဖွယ် ဒိန်းခနဲပယ်ချလိုက်တာပေါ့ nldအဆိုရှုံးတယ် ..သို့သော်နိုင်သွားတယ် ပြည်သူတွေသိတယ်...
ဘင်္ဂလားကိုကြည့် ရိုဟင်ဂျာ မျက်ခွက်ကိုကြည့် အတူတူပဲနော် သွေးဖောက်ကြည့်လဲတူမှာပဲ သမိုင်းပြန်လှန်လည်း ဘင်္ဂလီဆိုတာအရှင်းင်္ကြီး ဘာသာလဲတူတယ် စကားလဲတူတယ်..
အငြင်းပွားစရာသိပ်တောင်မရှိဘူး အဲဒါကိုတောင် ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ မနေ့တနေ့ကမှ ပေးထားတဲ့နာမည်ကို အသုံးချပြီး သူတို့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ ပေါ်တင်ကြီး ဗြောင်ငြင်းရဲတယ် လာမလုပ်နဲ့ ရုပ်တူတာတွေ လူမျိုးတူတာတွေ နားမလည်ဘူး မှတ်ပုံတင်မရှိသန်းခေါင်းစာရင်းမရှိ
စာရင်းမရှိအင်းမရှိကောင်တွေ တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်္ပြီး အသာပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်..အတင်းလာတဲ့ကောင် ကမ့်ထဲဆွဲထည့် အပြင်မှာမနေနဲ့ တစ်ယောက်မှလဲမကူညီနဲ့ တို့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ သားအရင်းကိုတောင်အမြွေပြတ်စွန့်လွှတ် အိမ်၇ိပ်တောင်မနင်းခိုင်းဘူး အဲဒါဘာကြောင့်လဲ အဲလိုလုပ်ရဲတာဘာကြောင့်လဲ
အဖြေက သူတို့မှာတိကျတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေဖော်ဆောင်မှုတွေရှိနေလို့ပဲ ကမ္ဘာက ဘာသွားပြောလို့ ရနိုင်တော့မှာလဲ..အဲဒါကို ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်
ငထွားခါးနာ ပြီးမြန်မာပေါ်ပုံကျနေတာ ဘာကိစ္စလဲ ..အဖြေက အခုလွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားသလိုမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ ..အဲလိုမလုပ်နိုင်လေလေ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေတကယ်ဖြစ်နေလို့
အစိုးရက ကိုင်တွယ်မရဲတာလို့ နိုင်ငံတကာက ထင်လေလေပဲ အဲလိုထင်လေလေ ဟိုကောင်တွေက အော်ကောင်းလေလေ ပတ်ချာလည်၇ိုက်နေတာ ပွဲက ..မရှင်းမရှင်း လုပ်နေတာကိုး အိန္ဒိယ ဝင်မလာနဲ့ ပစ်သတ်ပစ်တယ် ..ထိုင်း ကူးမလာနဲ့
ဒိုးတော့ ရေထဲကို ..လုပ်ရဲတာပေါ့ သူတို့နိုင်ငံသားလဲမဟုတ် နိုင်ငံသားဥပဒေက ခိုင်မာတာကိုး ဘယ်ကောင်ဝင်ညောင်လို့ရမှာလဲ မြန်မာကျမှ လက်ခံရမလိုလို လက်မခံရမလိုလို ဧည့်နိုင်ငံသားလို
လို (ဧည့်နိုင်ငံသားဆိုတာလဲ တဆင့်နိမ့်တာကလွဲရင်နိုင်ငံသားပဲ နှင်လို့မှ မရတာ ဥိးနေဝင်းတောင်ပြဿနာတွေတက်ကုန်တာ) အဲတော့မထူးပါဘူး ဘာမှန်းသိအောင်လုပ်ပြတဲ့လူကပြတော့လည်း
ဘာမှန်းမသိတဲ့လူက ဘာလိုလိုညာလိုလို ကန့်ကွက်တော့လည်း အမိ မြန်မာပြည်ရေ ကြံ့ဖွတ်တွေရှိသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ လို့သာ ကြုံးအော်ချင်တော့သာပဲ
မြန်မာကTop 10 ထဲဝင်တော့မလို့...နဲနဲလေးဟသွားလို့သာ...
အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် တခုရဲ့ တန်ဖိုး
by Nyein Chan Aye on Saturday, August 11, 2012 at 11:20am ·
စည်းလုံးခြင်း ရဲ့ သဘော နဲ့ ပျော်ရွှင်မှု တွေဟာ ကူးစက်မြန် ရောဂါတခုလို လူတွေကြား အလျင်အမြန် ပျံ့နှံ့သွားတယ်။ ဒါဟာ လန်ဒန် က အိုလံပစ် ပြိင်ပွဲကြီးမှာတင်မကဘဲ ကမ္ဘာကို ဖြန့် ဖြတ်ကျော်သွားရတယ်။ အထူးသဖြင့် စစ်ဆိုး၊ စနစ်ဆိုးရဲ့ ဒဏ်ကို ဆယ်စုနှစ် ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ အာရှတိုက် အလယ်ပိုင်းက ကုန်းတွင်းပိတ် နိုင်ငံငယ်လေးတခုဆီကိုပေါ့..။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ လန်ဒန် အိုလံပစ် တိုက်ကွမ်ဒို ပြိုင်ပွဲ တတိယနေရာလုပွဲမှာ အာဖဂန်နစ်စတန် နိုင်ငံက ရာလ်ဟူး နစ်ပိုင် (Rohullah Nikpai) ပြိုင်ဘက် ဂရိတ်ဗြိတိသျှ (The Great Britain) အသင်းက ကစားသမားကို အနိုင်ရ ကြေးတံဆိပ်ဆွတ်ခူးပြီး နောက်ပိုင်း လူမှုကွယ်ရက် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ၊ အီးမေးလ်တွေ မှာ အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေ နဲ့ တကမ္ဘာလုံးက အိုလံပစ် အားကစားချစ်သူတွေရဲ့ ချီးကျူးထောပနာပြုမှုတွေဟာ ပြည့်လျှံ သွားခဲ့ရတယ်။
အသေခံဗုံးခွဲမှု.၊ ကျောင်းတွေမှာ လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ် အဆိပ်သင့်မှု၊ ပြန်ပေးမှု စတဲ့ အနိဌာရုံသတင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နှစ်တနှစ်ရဲ့ အာဖဂန်ပြည်အတွက် ဒီ အိုလံပစ် ကြေးတံဆိပ်ဟာ ရွှေဆုထက် ပို အဖိုးထိုက်တန်လှပါတယ်။ မတူညီ ကွဲပြားမှုတွေ တင်းကြမ်း နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လှတဲ့ အာဖဂန်က လူမျိုးစု၊ ဘာသာရေး အုပ်စုတွေကြား လူကြီး၊ ကလေး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားလုံးဟာ ဒီဆုတံဆိပ် သတင်းကြောင့် တနေ့တာအတွက်ဖြစ်ဖြစ် တူညီမျှဝေခံစားနိုင်တဲ့ အပျော်နဲ့အတူ ညီညွတ်မှုကို ရရှိခဲ့ကြတယ်။ တာလီဘန်တွေတောင်မှ ဒီအားကစားပွဲ နဲ့ သတင်းကို ရုပ်မြင်သံကြား၊ အင်တာနက် တွေကတဆင့် စောင့်ကြည့် အားပေးရင်း ဝမ်းသာနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။
အာဖဂန်သမိုင်းမှာ ဗြိတိသျှ ကို နိုင်တာဟာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း ဗြိတိသျှ နဲ့ ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲသုံးကြိမ်စလုံး အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ ပြည်ပ ကျူးကျော်မှု တိုင်းကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းတဲ့ အာဖဂန် စစ်သမိုင်းကို ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြု သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို ကမ္ဘာ့လူသားအားလုံး ချစ်ကြည်ရင်းနှီး မိတ်ဆွေသဟာ ဖြစ်မှု နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ဆောင်တဲ့ အိုလံပစ် အားကစားပွဲမှာ ရာဇဝင် ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကို အနိုင်ရရှိတာကတော့ သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်း တခု ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။
လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ အခက်ထန် အကြမ်းတန်းဆုံး နဲ့ အန္တရာယ် အများဆုံးနေရာတခုလို ဖြစ်နေတဲ့ အာဖဂန်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြု ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အသက် (၂၅) အရွယ် တိုက်ကွမ်ဒို ကစားသမားလေး ရာလ်ဟူး အတွက် ဒီလို အနိုင်ရရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားတွေ၊ တာဝန်တွေနဲ့ ပိနေခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက အာဖဂန်တွေဟာ သွေးနဲ့ရေးတဲ့ သမိုင်းချည်းမဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်း၊ မျှတ၊ ချစ်ကြည် ငြိမ်းချမ်းမှုကို အရင်းတည်တဲ့ စင်ကြယ်တဲ့ ချွေးနဲ့ရေးတဲ့ အိုလံပစ် အားကစားသမိုင်းမှာပါ လူရာဝင် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာကို သက်သေပြနိုင်ဖို့ လိုတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့တိုင်းပြည်အတွက် လူငယ်ကလေး ရာလ်ဟူး သက်သေပြုနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ယူရေးရှန်း၊ တာခ်-မွန်ဂို အနွယ် ပါရှန်စကားပြော ဟာဇရာ လူမျိုးစုဝင် ရာလ်ဟူးလေး ဒီလို အမိ အာဖဂန်ပြည်အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာဟာ ဒါ ပထမအကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ် ဘေးဂျင်း အိုလံပစ်မှာလည်း အလားတူ ကြေးတံဆိတ် ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး အာဖဂန်နိုင်ငံ အိုလံပစ်သမိုင်းအတွက် ပထမဦးဆုံး ဆုတံဆိပ် ယူပေးရင်း တိုင်းပြည်ဂုဏ် ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
သွေးချောင်းစီး မြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေကြား မြို့တော် ကာဘူလ်းရဲ့ ခက်ခက်ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ လူမှုဘဝအောက်မှာ အသက် (၁၀) နှစ် အရွယ် ရာလ်ဟူးလေး ဟာ အခြား ရွယ်တူ ကလေးသူငယ် များနဲ့အတူ တိုက်ကွမ်ဒို ပညာရပ်ကိုစတင် ဆည်းပူးလေ့ကျင့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ နောင် မိသားစု စစ်ဒဏ်ကြောင့် တိုင်းပြည်က ထွက်ပြေးရတော့လည်း နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ အီရန်နိုင်ငံက ဒုက္ခသည် စခန်းများစွာရဲ့ အဘက်ဘက်က ပြည့်စုံမှု အားနည်းလှတဲ့ ဘဝမှာလည်း ရာလ်ဟူးလေးဟာ အခြားဘဝတူ ဒုက္ခသည်ကလေးများနဲ့အတူ တိုက်ကွမ်ဒို ကစားနည်းကို တစိုက်မတ်မတ် လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည် တာလီဘန် လက်က လွတ်လို့ မြို့တော် ကာဘူလ်း ကို ပြန်အခြေချ နေထိုင်ခွင့်ရတော့လည်း အိုလံပစ် အားကစား အစီအစဉ်နဲ့ အစိုးရက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာ ဆက်လက်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။
သူရဲ့ ငယ်ဘဝ တိုက်ကွမ်ဒို အားကစားကို စတင် တိမ်းညွတ်ဝါသနာပါလာရမှုကတော့ အာရှ နဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ရေပန်းစားတဲ့ သိုင်းရုပ်ရှင်တွေကြောင့်ပါ။ လူငယ်တိုင်း စိတ်ကူးယဉ်လေ့ရှိတဲ့ ခေတ်သစ် တိုက်ပွဲဝင် စစ်သူရဲကောင်းလေးအဖြစ် မျှော်လင့်ရင်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအားကစားနည်း နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်စားပြု နိုင်ငံတကာမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရလာတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ဒါဟာ နိုင်ငံ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ တိုင်းပြည်က လူမျိုးပေါင်းစုံ ရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ် သွေးစည်းရေး၊ တိုင်းပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ပြယုဂ်တခုဖြစ်ကြောင်း ရာလ်ဟူးလေး ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဝင် စစ်သူရဲကောင်း အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်ဂုဏ်ဆောင် ပြိုင်ပွဲဝင် အားကစားသမားကောင်းလေးအနေနဲ့ အမိနိုင်ငံ အကျိုးကို ဖော်ဆောင်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေး တိုက်ပွဲကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အားကစားနဲ့ ရှေ့ဆောင်မယ့် သူရဲကောင်းလေးအနေနဲ့ပေ့ါ။
၂၀၀၈ ဘေးဂျင်း အိုလံပစ်ပွဲမှာ သူ့ရဲ့ အိမ်မက်တွေ စတင်အကောင်အထည် ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ နှစ်ကြိမ်ရဖူးတဲ့ စပိန်က ပြိုင်ဘက်ကို အနိုင်ယူကာ တိုင်းပြည်အတွက် ပထမဦးဆုံး အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် ယူပေးပြီး အမိမြေကို ပြန်လာတဲ့ နိုင်ငံ့သူရဲကောင်း လူငယ်လေး ရာလ်ဟူးကို အစိုးရက ကား၊ အိမ်၊ ဆုကြေးငွေ ချီးမြှင့်မှုတွေနဲ့အတူ လူမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ ထောင်ချီနေတဲ့ အာဖဂန် ပြည်သားတွေဟာ အားရဝမ်းသာ လှိုက်လှိုက်လဲလဲ သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆို ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့အချိန်ဟာ သူချစ်တဲ့ တိုင်းပြည်က လူတွေအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ညီညွတ်ရေး သဘောတွေကို အားကစား အောင်မြင်မှုကနေတဆင့် ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အံ့သြဝမ်းသာလွန်းလို့ ကျလုဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ မျက်ရည်တွေကြား ချိုသာတဲ့ အပြုံးနဲ့အတူ ပြောလိုက်တဲ့ “ဒီဆုတံဆိပ်ဟာ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် ပြင်းထန်တဲ့ စစ်ပွဲဒဏ်ခံပြီးတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး သတင်းစကားလက်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ စကားဟာ အာဖဂန်ပြည်သူတွေ ရှေ့ဆက် လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဆူးညှောင့်ခလုတ်ပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခရီးကြမ်းအတွက် အားဆေးတခွက်ထက် ပိုခဲ့ရပါတယ်။
ခု လေးနှစ်အကြာမှာလည်း သူဟာ ထပ်မံပြီးတော့ တိုင်းပြည်မှာ စည်းလုံးညီညွတ် တည်ငြိမ် ငြိမ်ချမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းကို နောက်ထပ် ဆုတံဆိပ်တခု နဲ့ တိုင်းပြည်က လူမျိုးစုံကို သက်သေပြနိုင်ရင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာလည်း အာဖဂန်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ ဂုဏ်ကို ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ မတူညီ ကွဲပြားမှုတွေ ရှိတဲ့ လူမျိုးစု အုပ်စုလေးတွေဟာ သွေးချောင်းစီး သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ အရိုးစွဲ မုန်းတီးမှုတွေ၊ ငွေကြေး ဥစ္စာ အာဏာ အယူအဆ ဝါဒရေးရာ မာန်မာနအခြေပြု အလုံးစုံ ပျက်စီးရေးကိုသာ ရှေးရှုတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ အကြည်းတန် အရုပ်ဆိုးလှတဲ့ စစ်ပွဲတွေ၊ အစွန်းရောက် ရူးသွပ်မှုတွေထက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ငြိမ်ချမ်းလှတဲ့ အားကစား ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ စည်းလုံးညီညွတ် သာယာအေးချမ်းတဲ့ နိုင်ငံတခု အဖြစ် ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကို ရာလ်ဟူးလေးရဲ့ အိုလံပစ်ဆုတံဆိပ်တွေက ဖော်ဆောင် ညွှန်းဆိုနေပါပြီ။
တာလီဘန်တွေရဲ့ တကျော့ပြန်ခေါင်းထောင်လာနေမှု၊ ပြည်တွင်းစစ်မီး၊ အစိုးရရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ဘိန်းကုန်ကူးမှု ပြဿနာ စတဲ့ အခက်အခဲ အတားအဆီးမျိုးစုံ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အာဖဂန်ပြည်သူတွေရဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့် မနက်ဖန်ပေါင်းများစွာ ကတော့ ခုအခြေအနေ အနေအထားနဲ့ကြည့်ရင် အကောင်းဆုံး အလှဆုံး မဟုတ်သေးပါဘူး။ ရာလ်ဟူးလေးလို တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ပါရမီ၊ အရည်အသွေး ရှိ လူငယ်လေးတွေ၊ ပညာတတ်လေးတွေဟာလည်း ခက်ထန်လွန်းတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ကနေ မဖြစ်မနေ စွန့်ခွာနေရဆဲ၊ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ဘဝတွေကို ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီ ပထန်၊ တာဂျစ်၊ ဥဇဘက်၊ ရှီယာ၊ ဆွန်နီ၊ ဟာဇရာ စတဲ့ လူမျိုးစုံ နေထိုင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပူဆွေးငိုကြွေးမှု ရက်စွဲတွေနဲ့သာ ပြည့်နှက်နေတဲ့ သမိုင်းမှာ ရာလ်ဟူးလေး အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ်ယူပေးခဲ့တဲ့ နေ့ဟာ အတိတ်က အိမ်မက်ရိုင်း အိမ်မက်ဆိုး ဒဏ်ရာ အနာတရတွေကို ဖြေဖျောက်ကုသပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ စည်းလုံးပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ အပြည့်နဲ့ နေ့ကလေးတခု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ကလေးကို ဆောင်ကြည်းလာသူဟာ တိုင်းပြည်မှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဟာဇရာ လူမျိုးစုငယ်ဝင် ဖြစ်နေတာဟာလည်း လူမျိုးစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်မှုရဲ့ ကောင်းမွန် ပြည့်ဝတဲ့ သဘောကို ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝလှပါတယ်။ ဒါဟာ အာဖဂန်ပြည်သူတွေ အတွက် လှပတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အနာဂတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာလည်း လူမျိုးစုံ သွေးစည်းရေးအတွက် စစ်ပွဲတွေ၊ အမုန်းတွေ၊ သေနတ်တွေ၊ ကျည်ဆံတွေ ကို ကျောခိုင်းပြီး ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အားကစားပွဲတွေ၊ အားကစားကို အခြေပြုတဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ခိုင်မာတဲ့ တိုင်းပြည် အနာဂတ် ရည်မှန်းချက် တွေ ထားရှိ ဖော်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။ ရှေ့ဆက် လျှောက်ရမယ့် ဗမာပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ခရီးလမ်းဟာလည်း အာဖဂန်လောက် အခြေအနေမဆိုးပါဘူးလို့ သေချာပေါက် ဆိုနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ ကိုယ် ကြမ်းတမ်းပြီး ရှည်လျားလှပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုံ မှီတင်းနေထိုင်နေတဲ့ ကျနော်တို့ ဗမာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသာ ပြဿနာ အားလုံး အလုံးစုံ ဖြေရှင်းပြီး စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အတူ ပြည်ထောင်စု စစ်စစ် တည်ထောင်ကာ လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲ လူမျိုးစု အားလုံး သာတူ၊ ညီမျှစိတ်နဲ့ အုမကွဲ သိုက်မပျက် နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်ရင် တိုင်းပြည်လည်း ငြိမ်းချမ်းသာယာ တည်ငြိမ်လာပြီး အဘက်ဘက်က တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာကာ နိုင်ငံ့ အားကစား ကဏ္ဍလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာတော့ ဗမာ့ အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် အိမ်မက်တွေ ဧကံမုချ အကောင်အထည်ပေါ်လာမှာပါ။ အဲ့အချိန်မှာတော့ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ အစရှိတဲ့ လူမျိုးစုစုံ အားကစားသမားလေးတွေဟာ ရာလ်ဟူးလေးလို တိုင်းပြည်ရဲ့ စည်းလုံးရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားတွေကို အားကစား ဆုတံဆပ်တွေကနေတဆင့် ဖော်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အာဖဂန်နစ်စတန် လို ကိုယ့်ထက် ရာသီဥတု၊ သဘာဝ အခြေအနေ အပါအဝင် အဘက်ဘက်က ပြည့်စုံမှု၊ အခွင့်အရေးသာ ကောင်းမွန်မှု အားနည်းတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံကတောင် ခုအချိန်မှာ အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် ကို နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ယူနိုင်နေပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ ဗမာပြည်လည်း ရှေ့လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း အိုလံပစ်မှာ ဆုချိပ်အောင် ရည်မှန်းချက်ထား အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလောလောဆယ်မှာတော့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၄၀) ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရတဲ့ လာမယ့် အရှေ့တောင်အာရှ ဆီးဂိမ်း ပြိုင်ပွဲကို တရားမျှတစွာ ကျင်းပပေးကာ လူမျိုးစုံ ဗမာ့အားကစားသမားများ တိုင်းပြည် ဂုဏ်ဆောင်ကာ ဆုတံဆိပ်အမြောက်အများ ဆွတ်ခူးနိုင်စေဖို့ ဆုမွန်ကောင်းနဲ့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာလည်း အခုထက်ပို ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စိတ်နဲ့ အက်ဆေးစာတမ်းတိုလေးတပုဒ် ရေးပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်က အားကစားသမားတွေကို အားရပါရ ဂုဏ်ပြုခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
၁၂ ၊ သြဂုတ် ၊ ၂၀၁၂
Afghanistan’s Rohullah Nikpah poses with his bronze medal on the podium for the men’s taekwondo in the category under 68 kg as part of the London 2012 Olympic games. Photo: AFP
Published on Aug 9, 2012 by BurmaVJMedia
နေပြည်တော်မှာ လွှတ်တော်တက်နေတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Ahmet Davutogluက သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တည်းခိုရာနေအိမ်ကို ညနေ
၆:၄၅ နာရီတွင် လာရောက်ပြီး ၁ နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Pepsi ကုမ္မဏီမှ မစ္စစ် နိုရီနဲ့ တွေ့ဆုံ
Published on Aug 10, 2012 by BurmaVJMedia
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Pepsi ကုမ္မဏီမှ မစ္စတာ နိုရီနဲ့တွေ့ဆုံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ Pepsi ကုမ္မဏီမှ မစ္စစ် နိုရီတို့ဟာ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Aureum Palace Resort Hotel မှာ ညနေ ၄:၁၅ နာရီကနေ ၅:၃၀ နာရီအထိ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းကို နှစ်(၅၀)အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်လွှတ်လပ်စွာ ဒီကနေ့ ဖွဲ့စည်းထူထောင်လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ယုဇနဂါးဒင်းဟိုတယ်မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအသီးသီးက သတင်းစာဆရာတွေရဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံမှာ အခုလို ဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပြီး၊ ဒီအသင်းဟာ အစိုးရရဲ့ စွက်ဖက်မှုကင်းပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်သွားမယ့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ အသင်းရဲ့ ဥက္ကဌ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသ က RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီ ညီလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ သတင်းစာ ဆရာတွေကိုလည်း သတင်းအေဂျင်စီအလွှာ၊ အွန်လိုင်းအလွှာ၊ ရုပ်သံအလွှာ၊ ပုံနှိပ်မီဒီယာအလွှာ ဆိုပြီး အုပ်စု တွေအလိုက် သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်းမှာ ဥက္ကဌအဖြစ် စာရေးဆရာ မောင်ဝံသ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဌ (၁) အဖြစ် ဦးကိုကို (စက်မှု)၊ ဒုဥက္ကဌ (၂) အဖြစ် ဦးသီဟစော၊ ဒု ဥက္ကဌ (၃) အဖြစ် ဦးဝင်းငြိမ်း တို့ကို ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအသီးသီးက တက်ရောက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်(၁၃၀) ကျော်က မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း သြဂုတ်လ (၉) ရက် နေ့စွဲနဲ့ အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမြုတေ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲက အချို့အချက်တွေဟာ ဖြုတ်ပယ်ဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် လက်မခံနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒိအချက်တွေကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းကို ကိုယ်စားပြုသူတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမြုတေ စာနယ်ဇင်းကောင်စီမှာ ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဝင်များ သစ္စာ အဓိဌာန် ၅ ချက်ကို ကျိန်ဆိုနေကြစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း ၏ ဗဟိုဦးစီး အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောင်ခြင်းခံရသော ကျွန်ုပ်တို့သည်
(၁) သတင်းအမှန်ကို သိပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းတည်း ဟူသော ပြည်သူ များ၏ အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာပါမည်။
(၂) စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် အညီ ရရှိခံစားနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(၃) သတင်း မီဒီယာသမားများ ရရှိ ခံစားအပ်သော အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပါမည်။
(၄) စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်များကို မြှင့်တင်ရင်း အင်အားတောင့် တင်း ခိုင်မာသော စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်ပီသရေး ကြိုးပမ်းသွားပါမည်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံရှိသတင်းစာဆရာများ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ကို အထူးသဖြင့် အလေးထားလျှက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။
အထက်ပါ ကတိသစ္စာ ၅ ချက်ကို ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ လိုက်နာ ကျင့်သုံး သွားကြပါမည်ဟု လေးနက်တည်ကြည်စွာ အဓိဌာန်ပြုပါ၏
Enough is Enough (Please do not make the world CRAZY)!
(1) Who assasinated U Oo Kyaw Khine, the Deputy Commissioner of Akyab who was trying to maintain the law and order District in 1942?
(2) Who were the V Force who set fire on the houses of Arakanese Buddhists on the western bank of Mayu River during the war?
(3) Who asked for the division of Arakan in
1946 Alethangyaw Conference so that the western part Arakan should be incorporated into East Pakistan?
(4) Who declared Jihad on the newly independent Union of Burma in 1947?
(5) What was the Jihadist policy of the Mujahids? Isn't it to drive out all the Arakanese Buddhists from Buthidaung, Maungdaw and Ratheedaung?
Now you are presenting the fictitious stories and fake photos to the Islamic world and the international community.
We Arakanese have been suffering seventy years since 1942. How long we have to be patient? For another 700 years do we have? I don't want to repeat all these facts again and again.
According to the Rohinja problem in Rakhine division, Myanmar(Burma), that was only happened between the ethnic each and it was tookatime to control due to far away from the central government administration. Any way that is really happened and no need to cover the reality. The whole world can see in social media web site such as facebook that some evident photos since it was occurred.
Central government also took action on it as soon as possible and handed over to the military, rule out curfew for restoration in specific regions when civil administration unable to managed.
Unfortunately, in some countries peoples are using fake photos which happen not in Burma, all are happened in other countries (such as Thailand navy guard not allow to land these boat peoples onto their territory, self suicide burning in Tibet ) and blaming to Burma Buddhist monks and Burmese to arise more hardness. In Egypt, hard line demonstrators invaded to the Burmese Embassy and burn down Burmese flag. No country telling that is too much and even Egyptian police nothing taking action on it. How sympathy scenario is it. The whole world interesting in unrest of this riot and condemned, claimed to all Islamic countries leaders doing some action on it.
UN Human Right special envoy Mr Thomas Ojae Quantana came down to Rakhine, Burma and inspected the reality of the ground situation. He claim to reform the citizenship regulation of Burma for Rohinja at his press conference. We want to ask you the same question to your own country, will they accept it?
In this time being foreign minister and his wife from Turkey payahumanitarian visit on Rakhine, Burma. Too many Rohinja peoples hug him and cry deeply seems to be requested something for them.
We all Burmese want to clarify for these Rohinja problem to the world clearly.
This Rohinja peoples are came to Burma their self since long time ago and we not invited to come to stay in our land but we all allow then to stay on humanitarian reason. Actually they are just likeavisitors and no chance to claim for citizenship and citizen right at all.
We want to know that If any country give that kind of citizen right for visitor, please let us advice how to consider for processing accordingly. If the country so touched and sympathy for these Rohinja peoples struggling live in our country, you can bring them all at any time. Reversely , Rohinja peoples you do not want to live in Burma, you all can go to any other Muslim countries who invite you at any time. We do not want any one who create the problem with out knowing all the facts and believe on only fault news.
God given you brain and two ears two eyes, be smart.
“မြန်မာ-ရခိုင်ပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ မွတ်ဆလင် များးအပေါ် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့မှ အကြမ်းဘက် လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ၀မ်းနည်းမိပါတယ်။ ခုလို မဖြစ်အောင် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းသွားမှာပါ” ဟု Walubiမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် Yongris က အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နယ်မြေကို တလက်မမျှ မပေးနိုင် (ဒေါက်တာအေးမောင်)
မြန်မာ့မီးရထားမှာ လက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း အသက်အာမခံကြေးပါ မပါသေချာစစ်ဆေးပြီးမှဝယ်ယူပါ...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/11/2012 1 အကြံပြုခြင်း
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနားနေရာကို လူစားထိုးပေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၄ခုတောင်းဆို
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်အိုဟေး ကင်တားနားရဲ့ နေရာကို အခြား သူတစ်ဦးနဲ့ အစားထိုးပေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၄ ခု ခေါင်းဆောင်တွေက ကုလသမဂ္ဂဒုတိယ အတွင်း ရေးမှုး ချုပ် မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယားရဲ့
နိုင်ငံရေးအကြံပေး Mrs. Marianne Hagen နဲ့ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံစဉ် တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်အရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး မစ္စတာ ကင်တားနားရဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာ မျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်း ပြောဆိုခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ဒေါ်သန်းသန်းနုက RFA ကိုပြောပါတယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Myanmar Egress ရုံးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲဒီ တွေ့ဆုံပွဲမှာတိုင်းရင်းသားညီလာခံ ခေါ်ယူရေးကိစ္စ၊ပီပြင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုစနစ် ပေါ်ပေါက်ရေးကိစ္စနဲ့ ဘိန်းစိုက် ပျိုးမှုလျော့ကျရေး ကိစ္စတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့တြယ်လို့ သိရပါတယ်။
မစ္စတာ ဗီဂျေးနမ်ဘီယားရဲ့ နိုင်ငံရေးအကြံပေး Mrs. Marianne Hagen ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တင်ပြချက်တွေကို ကုလသမဂ္ဂ အထက်အရာရှိတွေထံ ပြန်လည်အစီရင်ခံမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန္တလေး ကုန်စိမ်းသည်များနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ အဖြစ်မှန် စာရွက်များ ဝေငှ ။
by ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ on Friday, August 10, 2012 at 1:18pm ·
မန္တလေး ကုန်စိမ်းသည်များနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ အဖြစ်မှန် စာရွက်များ ဝေငှသွားပါတယ်။ အများသူငှာဖတ်ကြည့်နိုင်အောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန် စီအိုင်အေ The World Facebook ထဲက BURMA ရဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Pepsi ကုမ္မဏီမှ မစ္စစ် နိုရီနဲ့ေ...
Enough is Enough (Please do not make the world CRA...
ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နယ်မြေကို တလက်မမျှ မပေးနိုင် (ေ...
မြန်မာ့မီးရထားမှာ လက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်အခါတိုင်း အသက်အာ...
မန္တလေး ကုန်စိမ်းသည်များနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ အဖြစ်မှန် စ...